obert gutu on News24
ARTICLES RELATING TO OBERT GUTU
Zimbabwe’s minister of justice has reportedly said that "there was no need for electoral reforms" a few months ahead of the country’s crunch elections later this year.
Zimbabwe's main opposition, the Movement for Democratic Change party, has called for a holistic approach in fighting graft after the government issued a three months moratorium for the recovery of funds siphoned from its coffers during ousted president Robert Mugabe's era.
MDC slams 'painstakingly slow, inefficient' voter registration exercise
Zimbabwe's main opposition, the MDC party, has slammed the "painstakingly slow and thoroughly inefficient" voter registration exercise undertaken by the Zimbabwe Electoral Commission.
Zimbabwe's main opposition, the MDC led by Morgan Tsvangirai, has launched a court challenge against President Robert Mugabe's recent declaration of voter registration dates, says a report.
Zimbabwean President Robert Mugabe's ruling Zanu-PF party has organised a march and rally in Harare to show support for under fire First Lady Grace Mugabe who received condemnation after her South African "wrath".
Zimbabwe's main opposition, the MDC party, led by Morgan Tsvangirai, has expressed "shock and complete disappointment" over a recent decision by government to declare President Robert Mugabe's birthday a holiday.
Zimbabwe's main opposition, the MDC party has slammed First Lady Grace Mugabe over her alleged bashing of a model that she reportedly saw in the company of one of her two sons in SA.
A Zimbabwean woman has been arrested after being found with 10 carats of diamonds stashed in her underwear, according to a local report.
Zimbabwe's main opposition, the MDC party has called for the implementation of a holistic and sustainable land reform programme that would ensure food security for the southern African country.
Zimbabwe's main opposition, the MDC, says that the renaming of Harare International Airport to Robert Gabriel Mugabe international is an "insult" to Zimbabweans.
Zimbabwe's longserving President Robert Mugabe has unveiled a new biometric voter registration programme ahead of next year's elections, drawing criticism from opponents who claim the system could be manipulated.
Zimbabwe's MDC party has urged the Registrar General's office to consider issuing free identity documents to poor Zimbabweans ahead of the 2018 general elections, says a report.
Zimbabwe's main opposition party, the Movement for Democratic Change led by Morgan Tsvangirai has called on the country's electoral commission to ensure that all eligible Zimbabweans are able to register to vote.
Zimbabwe's main opposition, the Movement for Democratic Change party has described First Lady Grace Mugabe as a "disgrace", adding that it is "regrettable that South African authorities decided not to prosecute her after she severely assaulted a 20 year-old model".
Zimbabwe’s main opposition, the MDC party has appealed to regional and internationals bodies to rein in President Robert Mugabe over an upsurge in politically motivated violence in the southern African country.